अध्यक्षको गरिमा बढाउने कि ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अध्यक्षको गरिमा बढाउने कि !
केही महिनाअघिदेखि मलाई एउटा विचारले आक्रमण गरिरहेछ । खासगरी, चितवनलगायत वरिपरिका जिल्लाहरुमा स्थापित साहित्यिक संस्थाहरु काम गरेरभन्दा नामको पछाडि दौडेर आफ्नो परिचय जोगाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । एउटै व्यक्ति कुनै संस्थाको अध्यक्ष पनि भएको छ, कुनै अर्को संस्थामा गएर उपाध्यक्ष भएको छ, फेरि अर्को संस्थामा पुगेर सचिव, अर्कोमा सहसचिव र अरु कयौँमा सदस्यका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । आपत्तिको विषय कहाँनेर हो भने यदि आफू रहेको संस्थालाई मजबुत, स्थापित, सशक्त बनाउने हो भने यसरी एउटै व्यक्ति विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनु राम्रो होइन ।
कुनै एउटा संस्थाको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा पुगेको मानिस अन्य संस्थाहरुको कुनै पनि पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । सकेसम्म कुनै संस्थाको जुनसुकै पदमा रहेको व्यक्ति अर्को संस्थासँग जोडिनु राम्रो होइन । किनभने, कुनै पनि संस्थाका आफ्नै किसिमका गोपनीयता हुने गर्छन् । अझ भन्नुपर्दा एउटै व्यक्ति विभिन्न संस्थामा रहँदा आउँदै गरेका नयाँ पुस्तालाई समेट्न नसकिने हुनसक्छ । त्यसमाथि, अध्यक्षजस्तो पदमा रहने व्यक्तिले त आफ्नै संस्थालाई पो उचाइमा पु¥याउनु पर्छ । अनि, अध्यक्ष पदको गरिमाका लागि पनि अर्को संस्थामा कार्यकारी पदमा बस्नु हुँदैन । बरू, सल्लाहकारसम्म बन्दा राम्रो हुन्छ ।
मैले उठान गरेको विषय सामान्य आँखाले हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । कतिपयलाई केवल पद प्राप्तिका लागि बहस गरेको पनि लाग्न सक्छ । अनि, कतिपयलाई प्राप्त पद गुम्ला कि भन्ने चिन्ता पनि हुनसक्छ । कुरा कतिसम्म सत्य हो भने प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सबैले आ–आफ्ना विचारअनुसारको संघ÷संगठन स्थापना गरेर त्यसलाई क्रियाशील बनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । तर, यसो भन्दै गर्दा एउटै व्यक्तिले विभिन्न संस्था ओगटेर बस्दा कुनै पनि संगठनमा आबद्ध नभएका स्रष्टाहरुले एक्लिएको महसुस गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ । तसर्थ, मेरो आशयचाहिँ कम्तीमा कुनै संस्थाको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै उसले अरु संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न इन्कार गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
चितवनमा वर्तमानमा झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढी साहित्यिक संस्था क्रियाशील छन् । चितनवकै सबैभन्दा पुरानो साहित्यिक संस्था साहित्य संगम चितवन, प्रशासन कार्यालयमा पहिलो दर्ता भएको संस्था चितवन साहित्य परिषद्, गजल मञ्च चितवन, हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठान, वाल्मीकि साहित्य सदन, चितवन वाङ्मय प्रतिष्ठान, अभिव्यञ्जना साहित्य प्रतिष्ठान, प्रगतिशील लेखक संघ, समर्पण साहित्य परिषद्, पल्लव साहित्य प्रतिष्ठान, कविडाँडा साहित्य प्रतिष्ठान, कैलाश साहित्य मञ्च, सिस्नोपानी समाज चितवन, गजल मञ्च चितवन, कालीगण्डकी साहित्य मञ्च, मध्यक्षितिज वाङ्मय प्रतिष्ठान, अक्षर समूह, अखिल नेपाल लेखक संघ, सुधारिएको चुल्होजस्ता अनेकौँ संस्था अहिले क्रियाशील छन् । त्यसैगरी सगरमाथा साहित्य समाज, अन्नपूर्णा परिवार, साहित्य सुधाकुञ्ज, ज्ञानज्योति साहित्य समूह, देवकोटा अध्ययन केन्द्र, उत्साही नारी प्रतिष्ठान, मीतज्यू साहित्य प्रतिष्ठानजस्ता कुनै समय असाध्यै सक्रिय संस्थाहरु अहिले सुस्ताएका छन् ।
साहित्यकै माध्यमबाट देशलाई चिनाउने केही सर्जक पनि छन् । स्वदेश तथा विदेशमै आफ्ना रचनाका माध्यमबाट आफ्नो र चितवनको गरिमालाई चिनाउने प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरु पनि चितवनमा नभएका होइनन् । ‘सेतो धरती’का लेखक अमर न्यौपाने र ‘खलंगामा हमला’की लेखिका राधा पौडेलले देशकै गरिमामय मदन पुरस्कार प्राप्त गरेर चितवन साहित्यिक सिर्जनाका क्षेत्रमा प्रभावशाली भएको पुष्टि गरेका छन् । त्यस्तै, कवि तथा निबन्धकार भूपिनले वर्तमानमा चितवनमै रहेर विश्वमा चितवनको साहित्य चिनाउने कार्य गरिरहेका छन् । त्यस्तै, चितवनका गरिमा प्रेमविनोद नन्दन, गैँडाकोटमा रहेर पनि चितवनसँगै भावनात्मक सम्बन्ध जोडेका गोविन्दराज विनोदी, सरिता तिवारी, धनराज गिरी, एलबी क्षेत्री, सङ्गीत आयाम, सिर्जन अविरल, पोषराज पौडेल, इन्द्र रेग्मी, रमेश प्रभात, पुष्प अधिकारी अञ्जलिलगायत कयौँ व्यक्तित्वहरु आ—आफ्ना कृतिका माध्यमबाट सुप्रसिद्ध बनेका छन् । पछिल्लो पुस्तामा सुमनराज श्रेष्ठ, भावना पाठक, मुक्त उदासहरु पनि नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा क्रियाशील बनिरहेका छन् । उल्लिखित संस्था तथा स्रष्टाका नामहरु केवल सम्झनाका आधारमा टिपिएका हुनाले प्रशस्त संस्था तथा व्यक्तित्वको नाम छुट्न गएको छ । तसर्थ, यस लेखमा ती संस्था तथा व्यक्तित्वको मानहानि गर्न खोजिएको होइन ।
चितवनमा जुनसुकै संस्थाले साहित्यिक कार्यक्रम गरे पनि त्यसमा सहभागी हुने व्यक्तित्वहरु एकैखाले हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय हरेक सार्वजनिक बिदाका दिन कम्तीमा एउटा साहित्यिक सत्संग हुने गरेका छन् । कुनैकुनै दिन भने एकैदिन दुई वा तीनवटा कार्यक्रमहरु जुधेर सहभागीहरुलाई कुन कार्यक्रममा जाने भन्ने समस्या पर्ने गरेको छ । अनि, अर्को मह¤वपूर्ण र बाध्यात्मक प्रसङ्ग के हो भने आफ्नो संस्थाको कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै सहभागी गराउन पनि अरु संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गइदिने परम्परा पनि बढेको देखिन्छ । त्यसरी अरु संस्थाको कार्यक्रममा नजाने हो भने आफ्नो संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी संख्या निकै टीठलाग्दो हुने गर्छ । यसरी पैँचो प्रवृत्तिबाट अहिले चितवनलगायत देशका साहित्यिक कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन् । अझ, एउटै व्यक्ति फरक–फरक संस्थाको पनि कार्यसमितिभित्र रहँदा उसलाई एकैदिन दुई—तीनवटा कार्यक्रमको संयोजन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी आइपरेको देखिन्छ ।
म स्वयम् पनि वर्तमानमा साहित्य संगम चितवनको अध्यक्ष छु । त्यसैगरी शिक्षा पत्रकार मञ्चको उपाध्यक्ष, अविरल सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्रको उपाध्यक्ष, गजल मञ्च चितवनको सचिव, अक्षर समूह चितवनको कार्यसमिति सदस्यजस्ता संस्था र पदमा रहेर काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । यसरी धेरै संस्थामा संलग्न हुन पाउनु गौरवको कुरा हुँदाहुँदै पनि मेरो सक्रियता अन्य संस्थाहरुमा निकै न्यून भइरहेको स्वयम् अनुभव गरिरहेको छु । यस्तो अनुभव अन्य मित्रहरुले पनि गर्नुभएको हुन सक्छ । मैले जति साहित्य संगमलाई समय दिइरहेको छु, त्यत्तिकै अन्य संस्थालाई पनि समय दिनुपर्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसको एउटै कारण हो, अधिक संस्थामा संलग्नता । तसर्थ, म साहित्य संगम चितवनबाहेक अन्य जति संस्थामा संलग्न छु, ती संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष तथा जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संगमको तीनवर्षे कार्यकाल नसकिँदासम्म अन्य कुनै पनि संस्थामा आबद्ध नगराइदिनुहोला । जुन संस्थामा अहिले संलग्न छु, ती संस्थाका अध्यक्ष महोदयले पनि मेरो कम सक्रियताको मात्र अपेक्षा गरिदिनु भएमा मलाई सहज हुने छ । संस्थामा मात्र बस्नु ठूलो कुरो होइन, त्यसमा रहेर संस्थाको आवश्यकता–अनुसार आफूले कत्तिको भूमिका निर्वाह गर्न सकियो भन्ने कुरो ठूलो हो ।
कसैको विचार उसको निजी सम्पत्ति हो । मेरो विचारले कालान्तरमा मूर्तरुप लेला या नलेला, तर मैले एउटा प्रस्ताव राखेको हुँ । कुनै व्यक्ति एउटा साहित्यिक संस्थाको अध्यक्ष बन्दा जति गरिमाको अनुभूति हुन्छ, त्यत्तिकै त्यो संस्थाले दीर्घजीवन प्राप्त गर्छ । तसर्थ, कम्तीमा अध्यक्ष बनेको व्यक्ति अर्को संस्थाको कार्यकारिणी पदमा नरहने हो भने अध्यक्षको गरिमा बढ्ने कुरामा दुईमत नहोला । कुनै व्यक्तिको परिचय उसको संस्थासँग पनि जोडिएर आयो भने त्यो गौरवपूर्ण हुन्छ । जसरी चितवनमै पनि केही साथीहरु हुनुहुन्छ, जसको नाम लिँदा संस्था पनि सँगै जोडिएर आउँछ । अर्थात्, व्यक्तिको नाम नै संस्था बनिसकेको छ । मैले ती व्यक्तित्वहरुको नाम यहाँ उल्लेख गरेर अन्य स्रष्टाहरुप्रति अन्याय गर्न चाहिनँ, जसका कारण सिंगो संस्थाको गरिमा बढेको छ । त्यसैले, म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब कुनै संस्थाको अध्यक्ष सबै संस्थामा नजोडिएर अध्यक्षको गरिमा बढाउने हो कि ! अस्तु ।